आज २८५६ जना संक्रमित, ३३३६ जना संक्रमण मुक्त - Mardi News
आज २८५६ जना संक्रमित, ३३३६ जना संक्रमण मुक्त
९ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४४ मर्दी न्यूज
पोखरा, ९ कार्तिक । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ८ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबार नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १ लाख ५८ हजार ८९ जना पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । आइतवारसम्म आइसोलेसनमा ४५ हजार ५ सय ७२ जना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए । यससँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमित संख्या ४५ हजार ५ सय ७२ जना रहेको छ ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ३ सय ११ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । हालसम्म कुल १३ लाख ९३ हजार १ सय ७३ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
त्यसैगरी आइतवारसम्म क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ६४ जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा ३ हजार ३ सय ३६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म निको हुनेको संख्या १ लाख ११ हजार ६ सय ७० रहेको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए
Previous नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको ठम्याई-प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखबीचको भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत
Next जो जहाँ जहाँ छौं, त्यहीँत्यहीँ रहेर दशैँ मनाऔँः प्रधानमन्त्री
२४ घण्टामा थप १४७४ जनामा संक्रमण पुष्टि, २९ को मृत्यु
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १५:४५ मर्दी न्यूज
हत्या गरिएका अवस्थामा शव फेला
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १४:४८ मर्दी न्यूज
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १२:५१ मर्दी न्यूज
पोखरामा कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु
भीरबाट मोटरसाइकल खस्दा नेकपाका नेताको मृत्यु
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १२:४८ मर्दी न्यूज
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १०:५८ मर्दी न्यूज